Izifundo zonyango kwiTabex-Iyeza lendalo lokuyeka ukutshaya
Izifundo zonyango kwiTabex
Izifundo zeKlinikhi ngokusebenza kweTabex
I-Tabex cytisine iye yavavanywa eklinikhi kwizigulana ezininzi. UStoyanov S. Kwaye uYanachkova M. Omnye wabadali beCytisine wafunda amavolontiya angama-70 enobuchule obude ekuyekeni ukutshaya kwaye wafumanisa ukuba iipesenti ezingama-57 zezigulana ziyekile ukutshaya ngeepesenti ezingama-31.4 isiphumo sasiyinxalenye: ukuncitshiswa kwecuba elitshayiweyo ukusuka kwi-20 ukuya kwi-30 ukuya 3-4 ngosuku. Iziphumo zazingalunganga kwipesenti ezili-11 zezigulana ezibangelwe kukumiswa kwangaphambi kwexesha kweTabex: ngaphambi kosuku lwe-3 lonyango-ixesha elifunekayo lokugcwalisa umzimba ngecytisine. Kwiqela lesibini labatshayayo abali-17 abanezifo ezigwenxa, ukulawulwa kwe-Tabex kunye ne-antipsychotic, i-antidepressants kunye ne-insulin iyalele abaguli aba-5 ukuba bayeke ukutshaya kwaye banciphise ukwehla.
Ngenxa yoko i-tabex ayihlali ngokwasenyangweni ngamayeza afunyenwe ngamaqela ezigulana. UVlaev S. Et al. Ukujonga ithuba lokulawula iimpawu zokudakumba kwizigulana ezintlanu ezinesifo sengqondo kunye noxinzelelo lwamaxesha ngamaxesha kumthamo weTabex kunye nokusetyenziswa. I-Tabex yaphunyezwa ngokuthe ngcembe ngokwandisa iidosi, idosi ephezulu yemihla ngemihla yi-15 mg. Ukuncitshiswa okukhawulezayo kweempawu zokudakumba, ukuphuculwa kwezigulana ezinokudakumba okusebenzayo okufunyanwa ekupheleni kweveki enye. Kwizigulana ezinengxaki yoxinzelelo lwamaxesha ngamaxesha - ukusuka ekupheleni kweveki yesibini. Njengomphumo wecala, uxinzelelo lwangaphakathi kunye nokuhla okuncinci kwenqanaba loxinzelelo lwegazi kubonisiwe.
Iziphumo ezichaseneyo neziyobisi zichazwa ngokwanda kwenqanaba le-catecholamine, ngakumbi i-adrenaline eyehliswe kwizigulana ezinokudakumba. Iziphumo ezikhuthazayo zikaTabex zaziwa ixesha elide, kodwa umsebenzi wakhe woxinzelelo uxelwa ngu-Antonov L. Kwaye V. Velkov. Iziphumo zonyango kunye ne-Tabex cytisine kwisibhedlele i-Friedrichsheim eBerlin zibonisa ukwehla kwenani labantu abatshayayo abayekileyo ukutshaya ne-Tabex cytisine. Isenzo sokuxinezeleka siqinisekiswa sisifo sengqondo kwizigulana ezi-2 ezifumene i-Tabex cytisine kwimeko yokuxolelwa.
Iziphumo zifana nokusetyenziswa kwe-psychoforin ye-antidepressant yezigulana. Ezi zibalo ziqinisekiswa nguStoyanov noYanachkova kwizigulana ezinengqondo. Ababhali bathi uhlobo loxinzelelo lufanelekile kunyango lwe-Tabex ngokunyuka ngononophelo kwiidosi zemihla ngemihla. U-Paun D. no-Franze J. Ukusuka kwisibhedlele i-Friedrichscheim eBerlin bafunde ngokusebenza kwe-Tabex kubantu abatshayayo abangama-266, ngokuthelekisa neqela lama-239 le-placebo. Iziphumo zalandelwa nge-4, yesibhozo, yeshumi elinesithathu kunye neveki ye-26th emva kokusebenzisa iTabex.
Izigulana ezinenjongo yokuyeka ukutshaya zibaluleke kakhulu. Kwiveki yesibhozo, i-55% yezigulana ezanyangwa nge-Tabex ziyekile ukutshaya, le pesenti yehle yaya kwi-26% ekupheleni kweveki yama-26. Abavavanyi beqela eliyintloko banciphise kabini kwinani lecuba elisetyenzisiweyo. Ababhali babonisa iziphumo ezizodwa zabo baphathwa nge-Tabex xa kuthelekiswa neqela elanyangwa nge-placebo kwaye bagqiba kwelokuba i-Tabex inokusetyenziswa ngempumelelo xa isiguli sizimisele ukuyeka ukutshaya. Izifundo zeklinikhi kwi-Tabex zenziwa kunye ne-Tabex enikwe abantu abatshayayo abangama-366 abane-hepatitis kunye nezigulana ezingama-239 ezanyangwa nge-placebo.
Emva kokugqiba ikhosi epheleleyo, iipesenti ezingama-55 zezigulana zayeka ukutshaya, kunye neqela eline-placebo kwabakho iziphumo ezingama-34%. Kwabatshayayo abangama-230 abane-bronchitis ephathwe nge-Tabex 85% bayeka ukutshaya kunye ne-Tabex ukuphela kweveki ye-4, kwaye emva kweeveki ezisibhozo-66% nasemva kweenyanga ezingama-23- 46%. Ezi ziphumo zibhalwe ngokubanzi kwaye zisetyenziselwa ukuqhubekeka nezifundo zeklinikhi. Iitafile ze-Tabex cytisine ziye zaya ngokuya zifuneka ngakumbi ngenxa yokukhuseleka kunye nokuba sempilweni kwezibonelelo ezinikezelwayo xa kuthelekiswa nezongezo ezisekwe kunicotine. Okulandelayo sisixhobo esineTabex Cytisine kwiqela elinomngcipheko labatshayayo eBerlin nasePotsdam.
I-Schmidt F. Yenze uvavanyo lobungakanani beziyobisi ezili-14 zabantu abatshayayo ngo-1975 ngendlela yokuvavanywa kabini kwe-placebo. I-Tabex yanikwa izigulana ezili-181 zizonke. Iziphumo zibonisa ukuba abaguli abaphathwe nge-Tabex babenokuphucuka okufanelekileyo. Izigulana ezili-103 ziyeke ukutshaya emva kweenyanga ezintathu le pesenti apho yehle yaya kwi-3%. I-Tabex ilandelwa kukusebenzisa iziyobisi i-niperli, i-atabaco, i-citotal, i-unilobin, i-potassium chloride, i-potassium granulate, i-potassium citrate, i-nicobrevin, i-targofagine, njlnjl. ezirekhodwe zizigulana ngokwazo kwiifom zemibuzo zinokuthenjwa.
Singafikelela kwezi zigqibo zilandelayo ngokubhekisele kunyango olusebenzayo lweTabex: Amayeza e-Tabex ahlalutywa kumavolontiya e-1045 kwaye kuthelekiswa nezigulana ezingama-400 ezanyangwa nge-placebo kunye nezigulana ezili-1500 ezanyangwa ngamanye amachiza okutshaya. Iziphumo ezifunyenweyo zibonisa ukuba i-55 ukuya kwi-76% yezigulana ezanyangwa nge-Tabex ziyeke ukutshaya. Ezi pesenti zenziwe ngokubanzi ezivela kwizifundo ezahlukeneyo zibalulekile kubalo, ke ngoko zikhulu kunalawo amanye amalungiselelo xa kuthelekiswa. I-Tabex ibonakalise ifuthe eliphezulu kwizifo ezinganyangekiyo zephemonari ezinxulumene nokutshaya ixesha elide, kunye nezigulana ezinezifo zengqondo ezinokudakumba.
Akukho ziphumo zibi ziye zafunyanwa ngokusebenzisa iTabex Cytisine. Ukuphuculwa okukhulu kwemeko ngokubanzi yezigulana kwaqatshelwa ngenxa yokupheliswa kwenicotine. Qaphela: iinyanga ezi-2 zezibonelelo zomjikelo. Izigulana ezityesheleyo kwiklasi yokuqala kufuneka ziphindaphinde ikhosi kwinyanga yesibini.
(I-Tabex ihlala icetyiswa ukuba ibhayisekile iphindwe kabini kwizibonelelo eziphezulu). Ukuba oku kuyasilela phinda ikhosi ngamanqanaba eenyanga ezi-4 ukuya kwezi-5 ngelixa usenza iinzame zokuyeka ukutshaya kunye neTabex phakathi.
Isebenza njani iTabex ngaphakathi kwengqondo yakho? Uyisebenzisa kanjani iTabex Malunga noMthi weLaburnum